APPLE SNOWDROP: SIFOOYINKA KALA DUWAN IYO SIFOOYINKA BEERASHADA, DABEECADAHA IYO SAWIRRADA - BEERTA
Waqtigan xaadirka ah, noocyada geedaha tufaaxa ee dwarf ayaa noqda mid caan ah.
Waxay u muuqdaan kuwo aan fiicnayn in la siiyo tufaax kale oo ay ku qaddariyaan bannaanka u sabab ah tayada qurxinta. Dhirta tufaaxa ee fiiqan waa doorasho aad u fiican oo lagu beerayo aag yar oo qurxin.
Apple Snowdrop waxaa loola jeedaa noocyada jiilaalka Waxa kale oo ay ku kala duwan yihiin waqti dheer ee jiifka. Marka si sax ah loo kaydiyo, tufaaxu wuxuu jiifaa illaa boqol iyo labaatan cisho kadib goosashada.
By noocyada jiilaalka sidoo kale ka mid ah: Sannadka of Moscow, Winter Beauty, Lobo, Sinap Orlovsky iyo Granny Smith.
Bannaanka ayaa inta badan waydiiyaan su'aasha - "Miyuu suurtagal yahay in la beero hal geed oo tufaax ah oo ku yaala goobta"? Xaqiiqdu waxay tahay ku dhowaad dhammaan noocyada in la koray ee xarigkeena ma aha is-pollinated. Snowdrop ma aha mid ka reeban.
Haddii ay jiraan meelo deris oo leh xayawaan tufaax ah oo agtaada ah, tani waxay noqon kartaa mid ku filan oo lagu beero. Haddii meelo kale oo ka fog yihiin, hubi inaad gashid tufaax labaad ee noocyada jiilaalka si ay geedku u bilawdo midho furan.
Wareegga ugu wanaagsan ee Snowdrop: Sokolovskoe, Halka iyo dhulka.
Sidee loo badbaadiyaa dalagyada xilliga jiilaalka?
Waa inay ku bilaabataa xaqiiqda ah in tufaaxa si haboon looga saaro geedaha. Waxaad ubaahan tahay in aad midhahaaga u soo qaadato farahaaga oo dhan, qaadista iyo ku soo duub oo ay weheliyaan asliga ah. Laguma talin inaad jeexjeexdo asliga ah.
Dalagyada la goostay cimilada qorraxda qallalan.. Haddii maalmaha ay yihiin daruuro iyo roobab, tufaaxa waa in la qalajiyaa intaan la goostin xilliga jiilaalka.
Wixii qashin ah, diyaariso xakamaynta alwaaxda yar. Tufaaxu way ka fiican yihiin inay isku laabmaan hal isku xigta, oo aan midba midka kale ku jirin. Si aad u sii dheeraato, waxaad ku duubi kartaa mid kasta oo warqad ama wargeys.
Haraaga kaydinta waa inay ahaadaan kuwo qalalan oo nadiif ah. Kormeerida midhaha. Kaliya miro caafimaad leh iyo mid dhan ayaa la goostay. (aan lahayn xoqitaan, qoob-ka-goyn iyo kallana).
Goobta ugu keydsan waxay noqon doontaa maqnaansho qabow.
Tayada haynta wanaagsan waxaa badanaa muujiya noocyo kala duwan oo geedo tufaax ah: Bryansk, pear jiilaalka, Kandil Orlovsky, Bolotovsky iyo Nymph.
Sharaxaad ka mid ah noocyada kala duwan ee Snowdrop
Kala duwan kasta waxay leedahay sifooyin gaar ah, sifooyinka shaqsiga iyo tayada. Kala duwanaantu waa mid aan laga reebin.
Snowdrop waxaa loola jeedaa geedo tufaax ah oo kala duwan. Waxaa lagu dhajiyay taajka horudhaca. Dhirta geedka ee keydka abuurka ah wuxuu gaaraa hal iyo badh ilaa laba mitir. Dhirta dhirta tufaaxa ee rootstocks ee laga helo bacriminta daaqa kama badna 1-1.5 mitir.
Jilif ee laanta iyo garbaha waa iftiin, brown.
Caleemaha waa cagaar leh tinge brown, size dhexdhexaad ah.
Caleemaha waa kuwo ballaaran, oo qotodheer, oo wareegsan, xajmiya, lana yareeyo dhinacyo yar.
Noocyo sida Sokolovsky iyo Ostankino ayaa sidoo kale matala geedaha koritaanka hoose.
Dhexdhexaad dhexdhexaad ah, qaab dhismeed oo casri ah.
Qubabka waa mid yar, toosan, dhumucuna waa dhexdhexaad.
Maqaarku waa siman yahay, wuxuu leeyahay midab qurux badan oo iftiin leh iyo midab ba'an oo dusha sare leh.
Jirka waa kareem fudud, casiir leh, macaan, oo leh miro yar.
Tufaax waa dhadhan fiican, macaan iyo dhanaan. Juice iyo saxarka ayaa ku badan vitamiin C. Ascorbic acid ma aha wax ka yar 18 mg hal miro, sonkana waa 8-9% oo keliya.
Kala duwanaanshuhu waa mid caalami ah, sidaa daraadeed wuxuu u adeegsanayaa qaabka dabiiciga ah, oo ku habboon iibka, wax soo saarka, diyaarinta suxuunta guriga.
Kala duwanaansho iyo noocyo sida Aport, Assumption, Friendship of People, Asterisk iyo Quinti.
Kala duwanaansho cusub ayaa u muuqatay in ay u mahad celineyso shaqada beeraha Ruushka: Mazunina MA, Putyatina V.I. iyo Mazunina N.F. Shaqada waxaa lagu qabtay machadka cilmi baarista ee miro kordhaya iyo qudaar. Barafka ayaa la helay iyadoo ay sabab u tahay pollination lacag la'aan ah geed geedka laga bilaabo Vydubetskaya oohin.
Kala duwanaanshaha waxaa loo yiraahdaa Western Siberia iyo Ural.halkaas oo dhakhso u noqotay mid baahsan. Snowdrop waxaa lagu kori karaa leynkeena. Degmadda Moscow, noocyada kala duwanna ma helin saameyn xun. Geedka tufaaxa wuxuu leeyahay dareen adag oo jiilaalka ah, sidaas awgeed waxaa sidoo kale laga heli karaa gobollada waqooyi, inkastoo tilmaamayaasha wax soo saarka laga yaabo inay hore u yaraato.
In Siberia, waxay dareemaan wanaagsan marka koraya kala duwan Krasa Sverdlovsk, Pavlusha, Altai Rumyana.
Dhirta waxay bilaabaan inay midho u dhashaan 3-4 sano kadib tallaalka.. Geedka tufaaxa dhallinyarada ah ayaa si joogto ah u miro dhaliya, ka dibna si wakhti ah. Celcelis ahaan, hal geed ayaa la soo ururin karaa ilaa 70-80 kg oo miraha ah.
Haddii aad rabto in aad geedo tufaax ah ku korisato goobahaaga, hubi inaad akhrido tilmaamaha daryeelka iyo abuurista.
Kaliya waad ku mahadsan tahay dadaalkaaga, dareenkaaga iyo dareenkaaga ayaa geedka tufaaxa dhalinyaradu bilaabi doonaan inuu si fiican u koro, u kobciyo oo keeno goosashada ugu horreysa.
Geedka geedka tufaaxa ah ayaa lagu talinayaa gugamarka barafku gebi ahaanba baxo, dhaxanta ayaa soo afjari doonta, hawada ayaa diirin doonta dhulka inta lagu jiro maalinta.
Waxaad ku howlan kartaa beeritaanka xilliga dayrta kahor bilawga xilliga hawada qabow. Xaaladdan oo kale, waxaa fiican in la hagaajiyo seedling si ay uga soo baxdo dabayl xoog leh, oo ka samee hoyga laga soo qaado mulch.
Goobta tufaaxa waa in ay iftiin iyo furan tahay. Hooska ayaa kori kara, laakiin si tartiib tartiib ah iyo tayada fruiting waxay noqon doontaa mid hooseeya.
Dhirta Apple waxay si fiican u raacdaa ciidda kala duwan. Ka reeban waa ciid adag dhoobo. Nidaamka xididka waa inuu neefsanayaa oo helaa qadar qiyaas ah oo ah qoyaan si uusan u joogsan.
Haddii ciidda ay culus tahay, waxaa lagu talinayaa in lagu daro ciid.. Xulashada ugu wanaagsani waa ciidda leh aciditty daciif, carrada chernozem leh bacriminta dhexdhexaad ah ama daciif ah.
Markaad dooranayso goob degaan ah, fiiri heerka biyaha. Haddii heerka biyuhu aad u sarreeyo, waa in lakab kale oo qashinka ah ee dhulka la dhigo.
Wixii dhalmo ah, god ayaa lagu qodaa qiyaastii 40 illaa 40 cm, waana inay noqotaa mid bilaash ah. Bartamaha hoose, tuulo dhoobo ah ayaa lagu sameeyey rooga iyo Bacriminta ayaa lagu dabaqay (peat, ash). Geedka waxaa loo dhigaa si toos ah bartamaha fossa, xididada waa la toosiyay, godkuna waa la aasi doonaa si ay colka xididku uga sii sarreeyaan heerka dhulka.
Biyaha waxay u baahan yihiin joogto ah, laakiin dhexdhexaad ah. Geedku ma jeclaanayo in la boodo ciidda. Beerta khibrad leh waxaa lagula talinayaa in ay sameeyaan kareemo gaar ah oo u dhow geedaha si ay u soo baxaan biyaha. Xilliga xagaaga waxa aad u baahan tahay inaad si joogto ah u dabacdo dhulka si ay xididada u neefsadaan.
Fadlan ogow in darajada aysan u dulqaadanaynin xagaaga kulaylaha badan. Haddii kuleylku aad u kululahay, hubi inaad taxaddar u yeelatid waraabinta wanaagsan, iyo sidoo kale ka dhig qorraxda qorraxda maalintii (haddii ay jirto fursad).
Geedka tufaaxa wuxuu u baahan yahay manjooyin joogto ah. Geedka yar yar wuxuu si gaar ah muhiim u yahay sameynta taajka saxda ah oo u adeega sidii cabbir ka hortag ah ee muuqaalka cayayaanka. Gug walba waxaad u baahan tahay inaad iska saarto qalalan, aan loo baahnayn (aan loo baahnayn), laamaha jaban iyo laanta.
Waa lagama maarmaan in la sameeyo khafiifinta ugxan iyo ugxanta. Marka ay si ku filan u dhistaan, waxaa lagama maarmaan ah in laga saaro midhaha dhexe oo ka soo jeeda kasta. Ilaa shan miro ayaa ku jira hal xidhmo.
Haddii aan la sameynin, dhadhanka midhaha ayaa hoos u dhigi doona, waxayna ku koraan cagaar, horumar la'aan. Kor u qaadista geed geedka tufaaxa ayaa sidoo kale u horseedi kara wakhti miro ah.
Gug walba waa in la bacrimiyo nafaqada, ka hortagga cudurrada, koritaanka wanaagsan iyo midhaha.. Wax kasta oo dheeri ah oo dabiici ah ayaa ku habboon Bacriminta: peat, ash, digada. Beerta Qaar ka mid ah waxay ku quudiyaan geed qaab foliar ah iyaga oo ku buufin leh sulfate potassium ama HOL.
Snowdrop waxay u dulqaadataa si fiican miro, laakiin mulching dhulka ka hor bilawga ah ee cimilada qabow ma noqon doonaa mid culus. Sida mulch fit: dhadday, peat, jilif, humus, hay. Mulch wuxuu ilaalin doonaa geedka tufaaxa ah si uu u keydiyo, guga wuxuu noqon doonaa nafaqo wanaagsan.
Barafka barafku wuxuu leeyahay difaac wanaagsan oo ka dhan ah cudurrada waxaana si dhif ah u saameynaya //selo.guru/ptitsa/bolezni-p/gribkovye/parsha.html.
Waa muhiim in la qaado tallaabooyin ka hortag ah si looga hortago cudurka.. Geedku wuxuu u baahan yahay daryeel habboon, sannadle ah oo la jarjaro oo bacrimiyo. Haddii uu jiro geed miro ah oo "dhibaato" ah oo ku saabsan sawirka, ma noqon doonto mid aad u macquul ah in lagu buufiyo kiimikada guga.
Apple wuxuu leeyahay cayayaanka khatarta badan leh: qolof, nuugaya, caarada, caarada, liistada, listobloshka, aboorka. Daaweynta mukhaadaraadka waxaa lagu sameeyaa guga, marka cayayaanka toosan oo bilaabaan inay ku degaan geed.
Iyada oo ku xiran nooca caymiska shakhsi ahaan loo soo doortay daroogo. Waxaad ka takhalusi kartaa aphids iyo caarada cas oo leh caawinaad xal karbofos ah. Laga soo bilaabo frivolok waxay ka caawisaa fumigada sigaarka. Xalka Zolon wuxuu kaa caawin doonaa in laga takhaluso Baalallay. Daaweynta Chlorophosome waxay wax ku ool u tahay aboorka iyo tsvetoeda.
Mid ka mid ah cudurada ugu caamsan waa xayrta maqaarka. Wuxuu saameeyaa caleemaha, caleemaha, ubaxa, jilifka, iyo xataa xitaa tagaan midhaha. Kareemada budada ah waxay si fiican u buufisaa xalka saabuun iyo naxaas sulfate. Haddii calaamadaha qolofta ay yihiin kuwo la dareemayo, geedku wuxuu u baahan yahay in lagu daaweeyo kiriim kollofoolo ama Hom.
Ha ilaawin xayawaanka noocan oo kale ah sida miraha miraha ah, xargaha, moths iyo macdanta.
Barafka barafka waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay noocyo caan ah oo caadi ah oo loogu talagalay koritaanka beeraha guriga. Waxaa lagu qaddariyaa dhadhanka wanaagsan, wakhtiga kaydinta dheer, iyo sidoo kale muuqaalkeeda quruxda badan ee soo koraya ee qurxinta.
Geedka tufaaxa noocan oo kale ah wuxuu noqon doonaa quruxda dhabta ah ee aag kasta, oo leh daryeel haboon wuxuu noqon doonaa wakhti fiican oo lagu raaxaysto goosashada munaasibka ah.